Search results for "भवनहरूमा काम गर्नु"
खाङबा तीप्‍कीन [ᴴkʰaŋba ᴴtip‍kin] क्रि.प. घर भत्काउने destroy building (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
चीक्‍जोवा [ᴴtsik‍dzowa] ना. डकर्मी mason, bricklayer (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
चीक्‍पा [ᴴtsik‍pa] (var. of SH: चीक्‍पु) ना. पर्खाल wall (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)
थीक [ᴴtʰik] ना. 1नाप measurement, work of measuring, measure, standard, size, measuring tool (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.) 2रेख caring for, caretaking, duty, right, owning, ownership (sem. domains: 8.3.1.2 - रेखा.)
थोक काप्‍कीन [ᴴtʰok ᴴkap‍kin] (imp: थोक कोप) क्रि.प. छाना छाउनु builda(house) roof (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
थोक पुक्‍कीन [ᴴtʰok ᴴpuk‍kin] क्रि.प. छाना छाउनु cover the roof (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
बार [ᶫbar] ना. 1बार, पर्खाल bar, hedge, fence, enclosure, barrier
, wall (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.) 2चरन field where cattle graze, meadow, pasture (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
श्‍याला ग्‍याप्‍कीन [ᶫʃala ᶫgʲap‍kin] (var. of SH: श्‍याल ग्‍याप्‍कीन) (imp: श्‍याला ग्‍योप) क्रि.प. लिप्नु smear, daub, apply smooth mud to walls and floor (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
स्‍यीङजोवा [ᴴs‍ʲiŋdzowa] (var. of SH: स्‍यीङजो) ना. सिकर्मी carpenter (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)